Soomaaliddu Abaal Ma Leh Bal Qisadan AKhriso…W/Q Axmed Nuur Guruje – GEELLE MAG
Soomaaliddu Abaal Ma Leh Bal Qisadan AKhriso…W/Q Axmed Nuur Guruje
Halkan waxaa idiinka muuqda Taliyihii horre ee Ciidanka Wadanka Soomaaliya , Indha-qarshe iyo Taliyiha cusub ee xilka kala wareegay Odowaaa , oo taagan munaasabadda xil wareejinta ee ay maanta xilkaas kula kala wareegene.
Gen Indha-qarshe waa kuma .
1977 Markii ciidamaddii xooga dalka Soomaaliyeed qabsadeen dhulka Soomaali galbeed , waxay isugu yimaadeen magaaladda Jigjiga oo ahayd meel istaraaji ah , meeshaas oo ay ka dhaceen , dagaaladdii ugu adkaa ee abid ka dhacay qaaradda Afrika .
Ciidamaddii Soomaaliddu waxay jigjiga ku eekeeyeen weerar dhinaca cirka ah iyo dhulka ah oo aan joogsi lahayn , muddo afar iyo toban cisho ah oo xidhiidha hasa yeeshee waxba ugama suurta gelin .
Dhibka Soomaalidda haleelayna wuxuu noqday in diyaaradihii Soomaaliddu heli waayeen raadaalkii diyaaradaha oo saaraa buuraha kaaraa mardha , diyaaradihii soomaalida intoo badnayda halkaas ku burbureen , ciidankii dhulkuna socon kari waayay .
Halkaa markay maraysay ayaa Taliskii ciidamadda Soomaaliddu adeegsaday madaafiic , madaafiicdaas oo uu hagayay ninka odayga ah ee halkan ku aragtaan Gen Indhe-qarshe .
Indhe qarshe , siduu Raadyoow ugu hagaayay maadaafiicdii wuxuu ku guulaystay ugu dambayn in uu burburiyo raadaalkii , halkaasna waxaa suurta gashay in ciidamadii soomaaliddu ku ruqaansadaan Kaara-mardha .
Alle ha u naxariistee , Abtigay Xuseen Axmed guuleed oo maalin maalmaha ka midda noo sheekeyey wuxu yidhi , waagaas waxaan ka ahaa Col , ah Gaashaanle dhexe , waxaanan hogaaminayay ciidamo ka tirsan kuwii malaintaa ku ruqaanaday kaaaraa mardha , buurahaa intii aaanan gelina waxaa noosoo sahamiyey oo sahanka noo qaabilsanaa , Col Maxamed Kaahin , oo ah Wasiirka arrimaha gudah aee imika Somaliland .
Gen Indha-qarshe maalintaas wuxuu heley , Bilad geesi hawlkarnimo dagaal iyo dalacaad wada socda .
Dhinaca kale , Gen Odowaa wuxuu dhashay 10 sanno ka dib 1977 oo ku beegan 1987 , wacdarahaasna waxba kama ogayn .
Indha-qarshe xil ka qaadista hadii lagala xishoon waayay , waxay ahayd in ugu yaraan la maamuuso oo hawlgab laggu sheego oo la dalacsiiyo , hassa yeeshee sidaas bilaa karaaamada ah ayaa loogu badalay wiilkaas yar ee caruurtiisa ka yar , Soomaalidu abaal maleh .